Vaovao - Milamina tsara ny tsenan'ny indostrialy amin'ny telovolana fahaefatra
Ny tsenan'ny valizy indostrialy dia efa milamina tsara amin'ny telovolana fahefatra
Tao anatin'ny telovolana telo voalohany tamin'ny taona 2016, nitombo haingana ny toekarem-pirenena, miaraka amin'ny tahan'ny fitomboan'ny harinkarena faobe 11,5%, izay nanome ny tsenan-tsofina baolina ho fironana tsara. Na izany aza, mitohy hatrany ny fironana amin'ny famoahana hafanana ara-toekarena, ary misy ny olana tsy manam-paharoa izay mety hamadika ny toekarena ho hafanana be loatra, izay tokony hojerena haingana. Antenaina fa tsy hiova ny firongatry ny fitomboana ara-toekarena haingana amin'ny telovolana fahefatra. Raha ny momba ny sehatry ny valizy dia maro ny anton-javatra mitaona, izay mendrika ny hojerena.
Amin'izao fotoana izao, ny fireneko dia mitaky fangatahana fanavaozana ny valizy sy fanavaozana ny teknolojia. Taorian'ny fikarohana sy fanao an-tsena an-taonany maro, ny sehatry ny valizy dia tokony ho mpisava lalana za-draharaha indrindra amin'ny fandraisana anjara amin'ny fananganana. Indrindra amin'ny fampidirana ny politikam-bola amin'ny fividianana valizy amin'ny 2014, ny haavon'ny valisialy eto amin'ny fireneko dia nisondrotra tampoka ho amin'ny sehatra vaovao. Ny Fikambanana Indostrialy Valve China dia nametraka drafitra savaranonando ho an'ny fanovana ara-teknika ny indostrian'ny milina fambolena notohanan'ny volan'ny trosa nasionaly tamin'ny 2008, ary inoana fa hampitomboina ny fanampiana ara-bola amin'ny trosa nasionaly amin'ny taona ho avy.
Raha ny fahitana ny tinady ao an-trano dia misy lafin-javatra marobe, fanjifana avo lenta ary teknolojia sy fitaovana nesorina, mametra ny fanafarana haitao anatiny izay nampivelatra ny fahaizany, manafoana ny politika famotsoran-ketra ho an'ny milina feno sy fitaovana feno, fampiharana haba famporisihana sy famotsoran-ketra ho an'ny singa lehibe, ary mampihatra fanentanana ho an'ny hetra any Shina’valves mitrandraka mavesatra sy valves enti-miasa. , Fitaovana milina ary fitaovana solika. Nanafaingana ny fanamboarana lalamby (anisan'izany ny lalamby haingam-pandeha). Ny salan'isa fampiasam-bola isan-taona amin'ny taona 2007-2010 dia hihoatra ny 300 miliara yuan, ary ny fanamboarana ireo làlambe ambanivohitra vaovao dia hampiasa vola mihoatra ny 400 miliara yuan. , Ny indostrian'ny fampitaovana lalamby dia handray anjara lehibe amin'ny familiana; manidy toeram-pitrandrahana arintany kely ary mamorona vondrona saribao lehibe, mamorona vondrona arina misy miliara 5-7 miliara, sns., dia hanome tsena malalaka ho an'ny fampiroboroboana ny valva-pitrandrahana sy ny valin'ny fitrandrahana arintany. Ankoatr'izay, amin'ny tsena ampitan-dranomasina, ny firoboroboan'ny fotodrafitrasa any Afrika, Amerika atsimo, Azia atsimo ary Eropa atsinanana dia vao nanomboka, ary goavana ny haben'ny tsena. Ho lasa tsena lehibe hijerena ireo orinasa any ivelany any ivelany izany.
Avy amin'ny fomba fijerin'ny fangatahana ivelany sy ny fanoloana import, Sina’Ny fizotry ny tanàn-dehibe dia mbola tsy feno, ary mihombo ny fananganana ambanivohitra vaovao. Ankoatr'izay, ny vokatra valizy injeniera ao an-toerana dia nahavita fandrosoana lehibe teo amin'ny kalitao sy ny serivisy, ary ny fanoloana ny marika vahiny dia mandroso hatrany. Noho izany, antenaina fa ny telo taona voalohany dia mbola ho vanim-potoana fitomboan'ny fitakiana valves injeniera.
Fotoana fandefasana: Mey-22-2021